Maitiro ekumisa geolocation yemifananidzo isu yatinotora neiyo iPhone | IPhone nhau
Imwe yemabhenefiti akakura atinogara tichipihwa neema smartphones patinovashandisa kutora mifananidzo kana mavhidhiyo, ndiko mukana wekuwedzera ma GPS enzvimbo yenzvimbo dzavakagadzirwa, yakanaka sarudzo patinoenda parwendo uye tinoda kuziva nguva dzose kwatakatora mifananidzo.
Iyi sarudzo, inoitwa natively mukati meIOS, inotibvumidza kuronga mapikicha zvinoenderana nenzvimbo yavo, inopfuura yakasarudzika sarudzo patinenge tichida kurangarira rwakati rwendo. Asi dzimwe nguva hatingave nehanya nekugovana nzvimbo yemufananidzo yatiri kuda kugovana. Mune ino kesi, sarudzo yakanakisa ndeyekudzima iyo geolocation yekamera uye nekudaro hatimanikidzwe kunyorera kune vechitatu-bato kunyorera.
Kana tikabvisa nzvimbo yekamera, mifananidzo yese yatinotora kubva panguva iyoyo haizosanganisi ma GPS, saka hatizokwanisa kuawana pamepu. Kugadzirisa ruzivo pane nzvimbo yemifananidzo iyi iri nyore kuita kune chaiwo nguva, asi Tinofanira kuyeuka kumisazve kana iyo nguva iyo isu kumanikidzwa kuimisa.
Dzinga nzvimbo yemifananidzo pane iPhone
Zvese sarudzo zvine chekuita nenzvimbo yemudziyo wedu zviripo mukati mezvakavanzika sarudzo, menyu yatinofanira kuwana kuburikidza nayo Zvirongwa> Zvakavanzika.
Mukati mechikamu cheKwakavanzika, tinoenda ku Nzvimbo, kwatinowana zvese zvinoshandiswa kana zvinhu zvechigadzirwa zvinokwanisa kuwana nzvimbo yacho. Kwedu, isu tinoenda kune sarudzo Camera.
Mune sarudzo dzakapihwa neKamera application isu yatinowana: Hazvina kumboitika uye Kana iyo app ichishandiswa, sarudzo iyo yakasarudzika yakasarudzwa. Kuti tidzivirire ma GPS enzvimbo yedu kubva pakuponeswa isu tichishandisa kamera, tinofanira kushandura sarudzo kuNape.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » Maitiro ekumisa geolocation yemifananidzo isu yatinotora neiyo iPhone
Toyota inosainira CarPlay kuti ibude muna 2019
LXORY siginicha Inotangisa AirPower-Chimiro Dual Qi Chaja